TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY «VISIOCONFERENCE » NY 31 MARTSA 2021
TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY
«VISIOCONFERENCE » NY 31 MARTSA 2021
NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY VISIOCONFERENCE NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANIO NOTARIHIN’NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA ARY NAHITANA NY PRAIMINISITRA SY IREO MINISITRA ISAN-TOKONY :
NOHAMAFISINA IREO FEPETRA HIADIANA AMIN’NY VALANARETINA COVID 19
Nohamafisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny fepetra rehetra noraisina ary ny paika sy ny drafitra hoentina miatrika ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina COVID-19:
IRETO NY FEPETRA VAOVAO HAPETRAKA MANOMBOKA IZAO HANAMPY IREO EFA MIPETRAKA :
- Ny CSB no mandray ny « formes légères » ireo izay mahatsiaro ho mikohaka sy reraka ary tsy dia tomombana tsara ny fahasalamany ka mitondra ireo soritr’aretina. Ireo CTC 19 kosa indray, dia mandray ireo « formes modérées » izany hoe ireo manomboka mihasempotra ka heverin’ny mpitsabo fa afaka mbola ampiasana ireo “concentrateurs d’oxygène”. Ireo hopitaly kosa no mandray ny « formes graves » izany hoe ireo efa tena sempotra be sy mila fanarahana manokana mihitsy ny toe-pahasalamany. Raha Antananarivo manokana dia etsy Mahamasina, Village Voara ary etsy Ivato (MBC ex CCO) no misy ireo Centre de Traitement du COVID 19 na CTC-19 ary miisa 28 ireo CSB afaka mandray ireo marary. Ireo CHU hopitaly lehibe rehetra eto an-drenivohitra dia mandray ny mararin’ny Covid formes graves avokoa ary efa nisy ireo services novahana ahafahana mandray ireo marary tena misy fahasarotana.
- Hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina dia haharitra 15 andro ny fialan-tsasatry ny mpianatra mandritra ny Paska izay hanomboka ny zoma izao. Ny Oniversite ihany koa dia hisy fialan-tsasatra mandritra ny 15 andro manomboka ny zoma ho avy izao ihany koa.
- Hividy ao anatin’ny fotoana fohy “générateurs d’oxygène” ny fanjakana hanampiana ireo efa misy any amin’ny hopitaly mandray ireo mararin’ny COVID 19. Ary omena fahafahana manokana ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny fikarohana ny tolo-bidy ara-dalàna mahakasika izany.
- 914 no laharana an-tariby afaka hiantsoana ny BIS amin’ny fanarahana ireo mitondra ny otrikaretina coronavirus ary hampitomboina ny ambulances hoentin’izy ireo maka ireo marary mamonjy toeram-pitsaboana.
- Hanao fanadiovana faobe ireo toerana rehetra mandray olona manerana ny faritra ny ministeran’ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana ary ilaina tohizan’ireo toerana mahazo izany ireo fanadiovana ary koa ny fametrahana ireo fitaovana fanadiovana tanana .
- Omena fahazoan-dalana ireo toerana fivarotam-panafody mba ho afaka mivarotra avy hatrany ireo « protocole de traitement COVID19 » ho an’ireo izay mividy izany any amin’izy ireo mivantana. Hamafisina ny fanomezana CVO plus ho an’ireo rehetra mitondra ny otrikaretina. Ary tokony hampiharian’ireo mpitsabo rehetra mandray ireo marary na any amin’ny sehatra tsy miankina na tsia ireo « protocole de soins » mba hahafahana mandray an-tanana haingana ireo marary mitondra ny soritr’aretina mba hisorohana ny fahatongavana amin’ny formes graves.
- Haverina hatsangana ao anatin’ny fotoana fohy ny PNGM (Plate forme Nationale de Gestion Médicale) hatao etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina mba hahafahana mifehy ny fihanaky ny valanaretina.
FIARAHAMIASA AMIN’NY FMI
Mipetraka ny fitokisan’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena an’i Madagasikara. Nampahafantarina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny fankatoavan’ny filankevim-pitantanan’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena ny fanampiana amin’ny alalan’ny FEC na ny Facilité Elargie de Crédit mitentina 312,4 tapitrisa dolara. Fandaharanasa vaovao mandritra ny 40 volana no nifanarahana izay mifandrindra amin’ny politikam-panarenana entin’ny fanjakana indrindra ny Planina Entina Manarina an’i Madagasikara na ny PEM ary koa hanamafisana ny ady amin’ny valanaretina COVID 19 sy ireo fanatsarana ary fanamafisana ara-toekarena rehetra entin’ny fitondram- panjakana ankehitriny.
FANANGANANA NY TANAMASOANDRO :
Nomen’ny Filankevitry ny Minisitra alalana ny fanafainganana ny fotoana ahafahana manao ny tolo-bidy amin’ny fananganana « immeubles » miisa 20, ny fanaovana ny « réseau d’assainissement » ao Tanamasoandro, ny fanaovana ny lalana ao Tanamasoandro ary ny fandrindrana ny firafitry ny tanàna vaovao . Nekena ihany koa ny fanatanterahana ny tsenam-barotra manokana amin’ny fanaovana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ao anatin’ny fotoana voafetra.
FANARAHA-MASO NY FIVEZIVEZEN’NY OMBY :
Hanamafisana ny ady amin’ny halatr’omby dia nampahafantarina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra, ny fandraisana didim-pitondrana hanarahana ireo omby miisa 1 hetsy any amin’ireto faritra ireto : Anosy - Androy - Atsimo Andrefana - Ihorombe, araka ny teknolojia vaovao miisa 2 izay efa miasa ankehitriny ka hoentina hanoloana ny bokin’omby any aoriana. Hiitatra manerana ny Nosy ny fampiasana azy io ao aoriana.
HATSANGANA NY « MUSEE DE L’AUDIOVISUEL » ETSY AMIN’NY ORTM ANOSY :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny hananganana “auditorium” lehibe afaka handray olona hatramin’ny 1500. Hisy ny fanangonana ireo vakoka rehetra nanomboka tamin’ny fijoroan’ny RNM tany amin’ny 90 taona lasa ary ireo tahirin-tsary sy tahirim-peo rehetra hatrizay sy ny fivoaran’ny fitaovana ao anatin’ny haino aman-jerim-panjakana, ary hapetraka ao anatin’io Mozea ho an’ny haino aman-jery etsy Anosy io. Hisy “studio d’enregistrement” manaraka ny toetrandro ihany koa ao anatin’io toerana vao harenina etsy Anosy io.
Araka ny tolo_kevitry ny Minisitry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy :
Noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra androany ny volavolan- dalàna mikasika ny Fanajariana ny Tany iarahantsika miasa amin’ny Royaume de Maroc izay natao sonia ny taona 2006, mba hanamafy ny fifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao eo amin’ny tany roa tonta, araka ny fehezan-dalàna mifehy ny tany tsirairay avy.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny fambolena fiompiana ary ny jono :
Noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra androany ny didim-panjakana hanatsarana ny fitantanana ny jono makamba an-dranomasina eto Madagasikara. Izany dia mifototra amin’ny famaritana vaovao ireo toerana ahafahana manao ny jono makamba ara-indostrialy, ny famerana ho 50 ny fahazoan-dalana mitrandraka izay hiparitaka manerana ireo faritra 06 ahafahana manao izany ary tsy hihoatra ny 05 taona ny fahazoan-dalana iray. Hisy ihany koa ny fanomezana « licence de pêche crevettière » izay tokony handoavana hetra isan-taona, hetra mifandraika amin’ny asa fitrandrahana, hetra miompana amin’ny hamaroan’ny jono makamba ataon’ilay sambo, ary ny hetra miompana amin’ny fanjonoana hazan-drano hafa voasarika anaty harato. Noraisina ao anatin’ny fepetra voarakitr’io didim-panjakana io ihany koa ny fahafahana manaisotra ny fahazoan-dalana rehetra mitrandraka ho an’ireo izay mandika ny fehezan-dalana apetraka.
Araka ny tolo-kevitry ny Fiadidiana ny Governemanta
M. RAKOTO Elie Clément, dia voatendry ho Sekretera Jeneraly Lefitra eo anivon’ny Fiadidiana ny Governemanta.
Colonel RASEHENOSON Raymond Patricia, dia voatendry ho Tale misahana ny fitantanam-bola eo anivon’ny OTME
Colonel RATSIMBAZAFY Jean Damascène, dia voatendry ho Tale misahana ny fifandraisan-davitra sy ny « Système de Surveillance » ao amin’ny OTME.
Général de Brigade Aérienne RANDRIANASOLO Fils Hyppolite, dia voatendry ho Major Général ny tafika an’habakabaka ao anatin’ny Etamazaoron’ny Tafika an’habakabaka.
Ramatoa SAVATSARAH RABY Gabrielle Ain’Harimanga, dia voatendry ho Sekretera Jeneraly
Atoa RAVELOMAHARAVO Jean Rufin, dia voatendry ho Talem-paritra ao Vakinakaratra.
Atoa BEMENA Albert, dia voatendry ho Talem-paritra ao Diana.
Atoa MANDIMBILAZA Noeriko Sylvain, dia voatendry ho Talem- paritra ao Boeny.
Atoa RAVELONTSOA Edson, dia voatendry ho Talem-paritra ao Alaotra Mangoro.
Atoa ELIHARISAONA Jocelyn Jacques, dia voatendry ho Talem- paritra ao Amoron’i Mania.
Atoa LIVA Florent Justin, dia voatendry ho Talem-paritra Menabe.
Ramatoa RAHARIMAMONJY Laliarisoa, dia voatendry ho Talem- paritra Analamanga
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy :
Atoa ZOARIMANANA Chan Sew Wah Angelot, dia voatendry ho Tale misahana ny fitantanam-bola ao amin’ny INFA.
Atoa RANDRIAMANANTENA Elie, dia voatendry ho « Conservateur de l’Office du Site d’Ambohimanga Rova » (OSCAR)
Natao androany faha 31 Martsa 2021
Fanomezam-boninahitra farany ny Filoham-pirenena teo aloha, ny Amiraly Didier Ratsiraka